ရော်နယ်ဒိုပြန်လာရင်တောင် လက်ရှိပုံစံနဲ့ မန်ယူတန်းဆင်းရမည်ဟု ပေါစခိုးလ် ပြော.. – FBV SPORT NEWS
မန်ချက်စတာယူနိုက်တစ်ဟာ စပါးကို ၁-၆ နဲ့ ဂိုးပြတ်ရှုံးနိမ့်ပြီး အသင်းနည်းပြနဲ့အတူ ကစားသမားများအားလုံးကို ပရိတ်သတ်များက ပေါက်ကွဲနေကြသလို မန်ယူ သမိုင်းတယောက်အဆိုးဝါးဆုံးအိမ်ကွင်း ရှုံးပွဲကို ကြုံတွေခဲ့ရပါတယ်….
ပေါစခိုးလ်က ” ကျနော် ဒီပွဲရလဒ်ကို စိတ်ပျက်စရာကောင်းမိတယ် လို့ အရင်ဆုံးပြောချင်ပါတယ်…ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ကစားသမားတွေ ဟာ နိုင်ပွဲဆာလောင်မှုကို နည်းနည်းမှမရှိဘူးအချောင်ခိုချင်တယ် …နောက်ပြီးတော့ ပရော်ဖက်ရှင်နယ် ကစားသမား အဆင့် စိတ်ဓာတ်တွေမရှိကြပါဘူး…….ပွဲထဲမှာ အာရုံစိုက်မှုတွေ အရမ်းနည်းသလို အချိန်ပြည့်ဖိအားပေးတာတွ မလုပ်နိုင်ဘူး….
ကနြောျသဘောမကတြာ တခုကို ပွောပွမယျ….သူတို့ကနျနတော လေ့ကငြ့ျရေးကှငျးက လေ့ကငြ့ျခြိနျမှာကစားနသေလို ဘောလုံးပေးပို့တာတှအေားမပါဘူး…ဆိုးရှားလျလူငယျတှကေို ကစားကှကျပုံဖောျတာညံ့တယျ…ဘော့ဈ (ဖာဂူဆနျ ) တုနျးကလို 4-4-2 ဘဲကစားခိုငျးပွီး အတကျအဆငျးကွမျးကွမးတှကေစားစခေငြျတယျ….လကျရှိကစားသမားတှရေဲ့ခွစှေမးျနဲ့ဆို ဒီတိုငျးကစားခိုငျးတာက ဘယျသူ ပိုအားမစိုကျလဲဆိုတာသိရပွီး ပှဲထှကျခှင့ျနရောတှကေိုပါ အပွောငျးအလဲဖွဈပွီး မနျယူအပွောငျးအလဲတခုဖွဈသှားပါမယျ…..
နောက်ဆုံးပြောချင်တာ က ဆိုးရှားလ် အနေနဲ့ ဒီတိုင်းဆက်သွားနေမယ်ဆို ရော်နယ်ဒို ပြန်လာရင်တောင် မန်ယူ တန်းဆင်းသွားရမှာဘဲလို့ ကျနော် ပြောချင်ပါတယ် ဟု Sport Tribble News မှာ ပေါစခိုးလ်က ပြောသွားခဲ့ပါတယ်….
ခံစစ်အသားပေး ကစားသူမို့ ယူနိုက်တက် ၆ဂိုးပဲပေးလိုက်ရတယ်လို့ မော်ရင်ဟို ခနဲ့